နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူ မ၀ဖြစ်လျှင် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် ဆေးနည်း – Lat Khat Than
နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူ မ၀ဖြစ်လျှင် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် ဆေးနည်း
အချို့ ကလေး၊ လူကြီး တို့ နှာခေါင်း ပိတ် ပြီး အသက်ရှူ ၍ မ၀ခြင်း မကြာ ခဏ ဖြစ်တတ် ကြပါသည်။ လူကြီးထက် ကလေးဖြစ်လျှင် တော် တော် စိတ်ပျက် စရာ ကောင်းပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ပါလျှင် လွယ်လွယ် ကူကူနှင့် မိနစ်ပိုင်း အတွင်း သက်သာ ပျောက်ကင်းစေသော ဆေးမြီးတိုလေးအား တင်ပြလိုက်ပါသည်။
နံ့သာဖြူ (အသား) ကို သွေးပြီး နှာတံပေါ်နှင့်် နှာခေါင်းဝအား လိမ်းပေးလိုက်ပါ။ တစ်ခဏ အတွင်း နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူ မ၀ခြင်း ပျောက်ကင်း သွားပါမည်။
နံ့သာဖြူ အတု အစစ် ရှိပါတယ်။ အတုက နံ့သာဖြူဆီနဲ့ မာလကာ သားကို ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ မာလကာသားမှာ အနံ့စွဲ သွားပါတယ်။ ချက်ချင်းတော့ အနံ့ စွဲနေတတ်ပါ တယ်။ ကြာလာတော့ အနံ့ ပျယ်သွားပါတယ်။ နံ့သာဖြူရဲ့ အနှစ်သားဟာ အလေးချိန် စီးပြီး ကျစ်လစ် သိပ်သည်းပါတယ်။ နံ့သာဖြူ အသားက အ၀ါရောင် သန်းပါတယ်။ နံ့သာဖြူ စစ်ရင် ဘယ်တော့မှ အနံ့ပျက်ပြယ်တာမျိုး မရှိပါ။
Credit : ရဲမျိုးသူ.(ဗောဓိမြိုင်)
နှာခေါငျးပိတျပွီး အသကျရှူ မဝပါလြှငျ
အခြို့ ကလေး၊ လူကွီးတို့ နှာခေါငျး ပိတျပွီး အသကျရှူ၍ မဝခွငျး မကွာခဏ ဖွဈတတျ ကွပါသညျ။ လူကွီးထကျ ကလေးဖွဈလြှငျ တျောတျော စိတျပကျြစရာ ကောငျးပါသညျ။ ထိုသို့ ဖွဈပါလြှငျ လှယျလှယျကူကူနှငျ့ မိနဈပိုငျး အတှငျး သကျသာ ပြောကျကငျးစသေော ဆေးမွီးတိုလေးအား တငျပွလိုကျပါသညျ။
နံ့သာဖွူ (အသား) ကို သှေးပွီး နှာတံပျေါနှငျ့ နှာခေါငျးဝအား လိမျးပေးလိုကျပါ။ တဈခဏ အတှငျး နှာခေါငျးပိတျပွီး အသကျရှူ မဝခွငျး ပြောကျကငျး သှားပါမညျ။
နံ့သာဖွူ အတု အစဈ ရှိပါတယျ။ အတုက နံ့သာဖွူဆီနဲ့ မာလကာ သားကို ပေါငျးလိုကျတဲ့အခါ မာလကာသားမှာ အနံ့စှဲ သှားပါတယျ။ ခကျြခငျြးတော့ အနံ့ စှဲနတေတျပါ တယျ။ ကွာလာတော့ အနံ့ ပယျြသှားပါတယျ။ နံ့သာဖွူရဲ့ အနှဈသားဟာ အလေးခြိနျ စီးပွီး ကဈြလဈ သိပျသညျးပါတယျ။ နံ့သာဖွူ အသားက အဝါရောငျ သနျးပါတယျ။ နံ့သာဖွူ စဈရငျ ဘယျတော့မှ အနံ့ပကျြပွယျတာမြိုး မရှိပါ။
Credit : ရဲမြိုးသူ.(ဗောဓိမွိုငျ)
အဂတိ လိုက်စားမှု ဖုံးဖိပေးထားသည့်် အထက် အရာရှိများကို အရေးယူမည်
တရားစွဲဆိုထားသည့်် ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်သံချပ်အဖွဲ့ဝင် (၇)ဦးအား ရုံးထုတ်ရာတွင် လက်ထိပ်ခတ်ထားခြင်း၊ ထမင်းစားခွင့်် မ​ပေးခြင်းတို့​ကြောင့််​ ဝန်းရံသူများနှင့််​ ရဲတပ်​ဖွဲ့ဝင်တို့ အကြား အချင်းများ